Thapyatan ခံတပ် | မြန်မာသွားရောက်ကြည့်ရှု
← မဟာ Aungmye Bonzan ကျောင်းတိုက်
Bagaya ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း →
အဆိုပါ Thapyatan ခံတပ် တစျဦးဖွစျသညျ3ပတ်ပတ်လည်မင်းတုန်းမင်းကတည်ဆောက်ရဲတိုက် 1875 ဧရာဝတီတက်ရွက်လွှကနေဗြိတိန်ရေတပ်တပ်ဖွဲ့များကိုရပ်တန့်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုအတွက် (ဧရာဝတီ) မန္တလေး၏တော်ဝင်မြို့တော်တိုက်ခိုက်ရန်မြစ်. Thapyatan ခံတပ်ပဲအင်း၏မြောက်စစ်ကိုင်းကူးမယ့်သံတံတား၏လက်ဝဲမှထိုင်လျက်ဧရာဝတီမြစ်၏အရှေ့ဘက်ကမ်းတွင်တည်ရှိပြီး.
အဆိုပါတိုင်းတာပေးသောဆိုက်မှာကျောက်ကိုကမ္ပည်းနှင့်ခံတပ်အချို့သမိုင်းရှိပါတယ်. Thapyatan န်းကျင်ဖြစ်ပါတယ် 400 အမြောက်များကိုဗြိတိသျှကျူးကျော်အပေါ်သို့မီးနိုင်ပါပြီလိုပေါ်မှာမြစ် facing သုံးပင်ပန်းနံရံများမြစ်ကိုတက်လာမယ့်အတူစတုရန်းပေ. အဟောင်းကိုအမြောက်များအများအပြားအရပျ၌နေဆဲယနေ့များမှာ.
မြို့ရိုးသည်အောက်အရပ်သင်ခဲယမ်းကြီးတွေသေနတ် Manning တပ်ဖွဲ့များများအတွက်အမြောက်များနှင့်ယူဆရရပ်ကွက်များအတွက်သိမ်းဆည်းထားခဲ့ပါတယ်ဘယ်မှာလေ့လာစူးစမ်းဖို့မှတဆင့်သွားနိုင်ပါတယ်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းရှိပါတယ်.
သငျသညျနေရာချထားအထောက်အကူပြုရန် Google မြေပုံရည်ညွှန်း Thapyaytan ခံတပ် – Google ကမြေပုံ
အခြား2ရဲတိုက်များမှာ Sinkyone ခံတပ်နှင့် Asaykhan ခံတပ်.
Sinkyone ခံတပ် Thapyatan ကဲ့သို့တူညီသောအရှေ့မြစ်ကမ်းပါးပေါ်နှင့်ဝေးရုံမြစ်ကမ်းပါးပေါ်တွင် zig-zag မြို့သည်မြို့ရိုးအပြင်ဘက်အင်း၏ဘယ်ဘက်တွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်. ကတုန်းပဲရှိပါတယ်နေတုန်း2အရပျ၌အမြောက်များက Thapyatan အဖြစ်အထင်ကြီးနေတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံမဟုတ်ပါ, ဒါပေမယ့်စစ်ကိုင်းမှမြစ်ကိုဖြတ်ပြီးကောင်းသောအမြင်များမ.
သငျသညျနေရာချထားအထောက်အကူပြုရန် Google မြေပုံရည်ညွှန်း Sinkyone ခံတပ် – Google ကမြေပုံ
Asaykhan ခံတပ် ဆန့်ကျင်ဘက်အင်းစစ်ကိုင်းအတွက်ဧရာဝတီမြစ်၏အနောက်ကမ်းပေါ်မှာဖြစ်ပါသည်. အဲဒီမှာရဖို့တောင်မှချက်ချင်းဆရာသင်တန်းကောလိပ်အတိတ်မြစ်လမ်းတလျှောက်တွင်ပြီးခဲ့သည့်မန္တလေးကနေအသစ်ကတံတားကူးခြင်းနှင့်တစ်ချိန်ကဦးခေါင်းကိုဖြတ်ပြီး. Asaykhan လည်း Thapyatan ထက်လျော့နည်းအထင်ကြီးဖြစ်ပါသည်. ဒါဟာမြစ်နှင့်သင်၏စစ်တိုက်ရာတွင်ကျဆင်းတဲ့သူတော်တော်များများသည်ဗြိတိသျှရေတပ်လူမျိုး၏ headstones ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်တဲ့သေးငယ်တဲ့သင်္ချိုင်း facing အများအပြားဟောင်းအမြောက်များမ 1855.
သငျသညျနေရာချထားအထောက်အကူပြုရန် Google မြေပုံရည်ညွှန်း Asaykhan ခံတပ် – Google ကမြေပုံ
attribute – https://commons.wikimedia.org/w/index.php?ရှာဖွေရေး = Thapyaytan + ခံတပ်
ခရီးသွားဧည့်ပါဝင်မှုတိုးတက်လာဖို့စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ Asaykhan ခံတပ်နှင့်အတူစတင်ပန်းခြံထဲသို့ရဲတိုက်ကိုဖွင့်ခြင်းနှင့်လည်းဒေသများသို့ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအစပြုမှလက်ရှိအစိုးရအားဖြင့်ဖန်ဆင်းခံရွေ့လျားရှိပါတယ်.